Blogs: डेस्मोडियम (Desmodium) Desmodium Sps घाँस बारे बुझौं!!
डेस्मोडियम (Desmodium) Desmodium Sps घाँस बारे बुझौं!!
परिचय :: डेस्मोडियम कोसालाग्ने जातको महत्वपूर्ण बहुवर्षीय घाँसबाली हो । यो चरनका लागि उपयुक्त घाँस हो । हे र साइलेज बनाउनका लागि पनि यो उपयुक्त हुन्छ । नेपालको मध्य–पहाडी क्षेत्रमा डेस्मोडियमका स्थानीय जातहरू पाइन्छन् । डेस्मोडियम समशितोष्ण जलवायुमा हुने जातको बाली हो । बढी वर्षा हुने नेपालको पूर्वी पहाडमा यसको खेती सफलतापूर्वक गर्न सकिन्छ । डेस्मोडियमलाई तराईको समथर फाँटदेखि १६०० मिटरसम्मको उचाइमा लगाउन सकिन्छ । सिल्भरलिफ डेस्मोडियमले केही मात्रामा तुसारो र सुख्खा पनि खप्न सक्छ । यसमा कच्चा प्रोटीनको मात्रा १६ देखि १८% पाइन्छ । कोसेबाली भएकाले यसले...
ओसिलो घाम नालागने ठाउँमा पनि गर्न सकिने बहु बर्षिय बदामे (Forage Peanut) घाँस खेती प्रबिधि!
यो मानिसहरुले खाने बदाम जस्तै देखिने, वर्षा याममा बढ्ने र फैलिने वहुवर्षिय कोशे घाँसहो । यो घाँसपशुहरुको लागि अति नै पोषिलो हुन्छ । यो घाँसवदाम जसरी नै जमिनमा जालो जस्तै गरी फैलिन्छ र जमिनलाई राम्रोसंग ढाक्छ साथै २० देखि ३० से.मी. जती अग्लो हुने गर्दछ। यो घाँसले अरु घाँससंग राम्रो प्रतिस्पर्धा गरी बा“च्दछ । यसले सुख्खा, अती चरिचरन र जनावरहरुको कुल्चाई समेत राम्रोसंग सहन सक्दछ । तुषारोले टुप्पो मर्न सक्दछ तर डाँठ मर्दैन र पछि डाँठको आ“ख्लाबाट पलाउने गर्दछ कम मलिलो जग्गामा पनि यो घाँसखेतीबाट राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ । यो घाँसको जरा माटोको भित्र तहसम्म जाने...
कुन महिनामा कुन कुन घाँस लगाउने त? घाँस पात्रो हेर्नुहोस!
सुक्खा ठाउँमा पनि हुन् सक्ने पोषिलो ज्वाइन्ट भेच (Joint Vetch) घाँस बारे बुझ्नुस!
ज्वाइन्ट भेच (Joint Vetch)Aeschynomene falcate परिचय : यो बुट्यान जस्तो एक डेढ मिटर अग्लो हुने एक÷दुईवर्षीय कोसे घाँसबाली हो । यसलाई वृक्षरोपण गरेको जग्गामा कृषि–वन प्रणालीअन्तर्गत पनि लगाइन्छ । यसलाई हरियो मलको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ । कोसे बाली भएकाले यसले माटोमा नाइट्रोजन मिलाएर मलिलो बनाउँछ । यो आफैं बीउबाट पनि वृद्धि हुन्छ । एकपटक छरेपछि फेरि दोह¥याएर बीउ छर्नु पर्दैन । यसलाई चरन घाँसको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले केही मात्रामा जमेको पानी पनि सहन सक्दछ । हावापानी : यो उष्ण तथा समशितोष्ण हावापानीमाहुने घाँस हो । यसलाई नेपालको तराई तथा मध्य–पहाडी क्षेत्रमा...
मुलाटो (Mulato) Brachiaria Sps. cv mulato घाँस सम्बन्धि जानकारी!!
परिचय : यो बहुवर्षीय अकोसे घाँस हो । यसको हरियो घाँस काटेर र हे वा साइलेज बनाएर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । बाह«ै महिना उत्पादन दिइरहने भएकाले व्यवसायिक पशुपालकहरूका लागि यो उपयुक्त घाँस हो । हावापानी : यो उष्ण तथा समशितोष्ण हावापानीमा हुने बहुवर्षीय अकोसे बर्णशड्ढर घाँस हो । समुद्रसतहदेखि १८०० मिटरको उच्चाइसम्म यसको खेती गर्न सकिन्छ । यो घाँस बगैंचा भित्र पनि लगाउन सकिन्छ किनकि यसले केही मात्रामा छहारी सहन सक्दछ । माटो : पानीको राम्रो निकास भएको, मलिलो तथा सबै किसिमको माटोमा यो घाँस लगाउन सकिन्छ । लगाउने समय : सिँचाइ नभएका स्थानहरूमा जेठदेखि...